Website ဆောက်ပြီးရင် ပြီးပြီလား? -
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် သမားရိုးကျကြော်ငြာတွေကနေတစ်ဆင့် ဒီဘက်ခေတ် Digital Marketing ဆီသို့ကူးပြောင်းလာတဲ့ ယခုကာလတွေမှာ Website တွေ စတင် တည်ဆောက်လာကြတာတွေ့ရမှာပါ။ ဒီမှာ မေးစရာရှိတာက Website ကို ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆောက်ကြတာလဲ၊ Website ကို ဘယ်လို အကျိုးရှိရှိ (ကုန်ကျထားတာနဲ့တန်အောင်) အသုံးချသွားနိုင်မလဲဆိုတာက အဓိက မေးခွန်းတစ်ခု ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
Website တစ်ခု တော့ဆောက်လိုက်ပြီ၊ လွှင့်တင်ပြီးသွားလို့ ပြီးသွားပြီ၊ လူတွေ Auto လာကြည့်ကြမယ်လို့ဘယ်တော့မှ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ရှင်းရှင်းလေးပါ၊ ဘယ်သူမှမသိလို့ပဲ။ ကိုယ်က မကြေငြာဘဲ၊ Website ရှိကြောင်းမပြောဘဲ ဘယ်သူမှ လာမကြည့်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် လူကြီးမင်းအတွက် အဓိက မေးခွန်းက Website ဆောက်ပြီးရင် ပြီးပြီလား?
မပြီးပါဘူး။ ကိုယ့် Website ကို ဘယ်သူတွေ၊ ဘယ်နေရာကနေ၊ တစ်နေ့ကို၊ တစ်လကို ဘယ်နှစ်ယောက်ယောက်လောက်လာကြည့်တယ်၊ ဘယ်နှစ်ယောက်ကတော့ဖြင့် ဆက်သွယ်လာပြီး ကိုယ့်ရဲ့ Customer ဖြစ်သွားတယ် စသည်ဖြင့် သိရပါဦးမယ်။ ဒီ Data အချက်အလက်တွေ သိတော့မှ၊ ကိုယ့်ရဲ့ကြော်ငြာမှုကို ပိုပြီးထိထိရောက်ရောက် ချဲ့ထွင်နိုင်မှာလေ။ Analytic ဆိုတဲ့ Program တစ်ခုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ Website ကို စောင့်ကြည့် လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Marketer တွေအတွက် မရှိမဖြစ်ပေမဲ့ Web Developer တိုင်းတော့ ဒီအချက်တွေကို မသိနိုင်ပါဘူး။
တစ်ချို့က Website နဲ့ပတ်သတ်လို့အမြင်လွဲနေတာလေးတွေရှိတတ်တယ်။ ဥပမာ .. “MgMg Design Company” က Website ရေးတဲ့ အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုကြပါစို့။ Website ဆောက်ချင်တဲ့ Customer တစ်ယောက်က Research အနေနဲ့ရှာတဲ့အခါ “MgMg Design Company” လို့ရှာမယ်ထင်လား၊ “Web Design Company” လို့ရှာမလား။ အဖြေကရှင်းရှင်းလေးပါ။ “MgMg” ဆိုတဲ့ Brand ကို ဘယ်သူမှမသိတဲ့အတွက် “Web Design Company” လို့ပဲရှာကြပါတယ်။ အဲဒီတော့ “Web Design Company” ရှာတဲ့အခါ “MgMg Design Company” ထွက်ပေါ်လာအောင် လုပ်နိုင်တဲ့သူကသာ Website ကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချနိုင်သူ စီးပွားရေးပညာရှင်ပါ။
လုပ်ငန်းရှင်တိုင်း ဒီလိုနည်းပညာတွေ အချိန်ကုန်ခံလုပ်တတ်နေစရာမလိုပါဘူး။ သဘောသဘာဝနဲ့အကျိုးအမြတ်တွေကို သိရှိနားလည်ထားရန်ပဲ လိုတာပါ။ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေကို ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့ လုပ်ငန်း Operation ထဲမှာ မြှုပ်နှံထားပါ။ နည်းပညာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ Marketing အပိုင်းကို ကျတော်တို့တာဝန်ထားလိုက်။
တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု အပြည့်အဝရှိတဲ့ ကျနော်တို့ Team နဲ့၊ နည်းပညာခေတ်ရဲ့ အကျိုးရလဒ်ကိုပဲ အခုစတင်မြည်းစမ်းကြည့်နိုင်ပါပြီ။
Posted by seomhkl/ Tuesday August 1st, 2017/ Blog/0Comment